सुरु बगैचा बगैंचा उपकरण र उद्यान उपकरणहरू Verticutter
1 स्किनिफायर परीक्षण 2017
2 स्नेहक - समझयोग्य
4 कसरी भिन्न किसिमका कामदारहरू काम गर्छन्
5 सही छनौट गर्नुहोस्
6 स्वादफायर सामानहरू प्रयोग गर्नुहोस्
7 त्रुटिहरू सजिलैबाट बच्नुहोस्
8 सही लानको हेरचाह पछि
9 हेरविचार र उपकरण सफा गर्नुहोस्
10 भाडा वा खरिद गर्ने?
11 स्नोफायर प्रवृत्त
स्किनिफायर परीक्षण 2017
त्यसैले कि तपाईं आफ्नो लानमा राम्रोसँग, मजा लिन सक्नुहुन्छ Verticutter लन हेरचाहको समयमा मोटाइमा नजानुहोस्। व्यापारमा तपाईंले विभिन्न मोडेलहरू फेला पार्नुहुनेछ, जुन मूल्य, प्रदर्शन र कार्यक्षमताको सन्दर्भमा स्पष्ट रूपमा भिन्न हुन्छ। खरिद निर्णय सजिलो गर्नको लागि, हामीले तपाईंको लागि महत्त्वपूर्ण जानकारी सङ्कलन गरेका छौ।
स्नेहक - समझयोग्य
लान सतह को उजागर गर्न को लागि, एक स्नेहक को आवश्यकता हो। यन्त्रको नाम अंग्रेजी भाषाबाट व्युत्पन्न गरिएको थियो - ठाडो कटौती गर्न। दु: खको उद्देश्य उद्देश्यले मलच, मास र सामा, फ्लोरिडा र लानको बीचको लान्दी कोट हटाउनुपर्दछ। Perpendicular वसन्त इस्पात चक्कुहरू लगभग दुई देखि तीन मिलिमिटर गहिराइको माथिल्लो मिट्टी तहमा प्रवेश गर्दछ। रोटेशनले लानको गहिरो जरालाई हानिकारक बिना फ्लोर सतहको स्क्रैप गर्न सक्छ। घाँस, अर्कोतर्फ, सामान्यतया जडहरूसँग जडित हुन्छ र यसैले अब बढ्न सक्दैन। लन पनि माईस र क्लोभरबाट मुक्त छ, जुन केवल अन्य कठिनाई संग काम गर्न सकिन्छ।
लन को लागी फर्श वाला सतह सम्म पुग्न को लागी अनुमति को लागि धेरै लंबा नहीं हुनु पर्छ। यदि लान धेरै अधिक छ (4 मिमी भन्दा माथि), स्न्यानेफायर प्रयोग गर्नु अघि लानमा बोल्न सकिन्छ। 2-4 मिमी बीचको लम्बाइलाई स्किमिङको लागि आदर्श छ।
कसरी भिन्न किसिमका कामदारहरू काम गर्छन्
सरल र सबैभन्दा किफायती स्प्रिफायरहरू ह्यान्ड-ह्यान्ड कटरहरू हुन्। ब्लेड एक लामो ह्यान्डलमा छन्। एक किल्लाको समान, घाँसका कानहरू म्यानुअल रूपमा यी बगैंचा उपकरणहरूसँग व्यवस्थित हुन्छन्। त्यहाँ पनि मोडेलहरू छन्, जसमा2पाङ्ग्राहरू ह्यान्ड लॉनमर्ससँग छन्। फलिङ र सामालाई निकालेका छन्। हस्त-आयोजित ठेकेदारसँग यो काम गरिनै सजिलो छैन, उदाहरणका लागि, पत्तिहरू सँगसँगै राख्न। प्रविष्टि र प्रतिरोधको गहराईको कारण गहिराई र हानिकारक हातमा विषको विरोध गर्दा घाँटीको प्रयोग लामो समय लाग्न सक्छ र धेरै सतावट हुन सक्छ। इष्टतम नतिजा प्राप्त गर्न को लागि प्रकाश को दबाव को लागी एक नै समय को रेक को संभालने अर्को चुनौती हो। यदि धेरै थोरै दबाब लागू हुन्छ भने, सबै जडीबुटीहरू जडित छैनन्। यदि धेरै अधिक दबाव लागू हुन्छ भने, लान काट्न सकिन्छ वा जडहरू क्षतिग्रस्त हुनेछ। यसकारण सानो कानहरूका लागि विशेष रूपमा उपयुक्त छ जुन जहिले पनि जडिबुटीको छेउमा पर्दैन। प्राय: गहिरो साफ क्षेत्रहरू बाँकी छन्, जुन पुन: प्रयोग आवश्यक पर्दछ।
ठूला क्षेत्रहरूका लागि वा यसलाई अझ कुशलतापूर्वक काम गर्न सजिलो हुन्छ, मोटरसाइकल स्किफायरहरू बजारमा उपलब्ध छन्। यो काम धेरै मात्रामा सुधार्न र राम्रो, अझ बढि परिणामहरू पनि उद्धार गर्दछ। मोटर चालित यन्त्रहरूको अवस्थामा, बिजुली र पेट्रोल इन्जिनहरू बीच छनौट छ, जुन दुवैको फाइदा र हानि छ। लान घास काटिएको जस्तो, एक मोटर संचालित स्किनेफायरले लीन सतहमा धक्का दिइन्छ। एक मोटर वसन्त चक्कु संग रोलर चलाउँछ, जो रोटेशन ले जमीन द्वारा रैक ले। बल व्यय यस प्रकार उपकरण को धक्का मा कम छ, यसैले अतिरिक्त व्हील ड्राइव संग मोडेल पनि छन्। यो विशेष रूप देखि फलाम मा ढोका को लागि लाभ को पेशकश गर्दछ। काम गर्ने गहिराई समायोजन गर्न सकिन्छ। केहि मोडेलहरूसँग विभिन्न ब्लेडहरूसँग अन्तरप्रायोगयोग्य रोलर्सहरू छन्। यसले यन्त्रहरूलाई अझ राम्रोसँग अनुकूलन गर्न अनुमति दिन्छ। कार्य चौडाइ सामान्यतया 30 र 50 सेन्टिमिटरको बीचमा हुन्छ। केहि मोडेलहरू क्याप्चरब्याक छ वा पक्राउने कि तुरुन्तै हरा हरियो बर्दाश्त गर्दछ र केवल लानमा झूटो बोल्दैन। योसँग सम्बन्धित छैन। सिकारको उद्देश्य यो हरी बर्बाद बाहिर लान प्राप्त गर्न को लागी, हरी बर्बाद बस पछि लान्दर्भिक मा बायाँ हुनु हुँदैन।
बिजुली र पेट्रोल इन्जिन बीच चयन गर्दा निम्न पक्षहरू महत्वपूर्ण छन्। एक विद्युत स्नोफायर एक पेट्रोल स्प्रिफायर भन्दा हल्का हो। यसैले यो धक्का गर्न सजिलो छ र, निस्सन्देही, जब यो ढुवानी गर्न गाह्रो हुन्छ, उदाहरणको लागि वा भण्डारणको लागि शेडमा लिनु पर्छ। यसबाहेक, कामदार शोर धेरै शान्त हुन्छ, जसले छिमेकीहरूलाई लाभ पुऱ्याउँछ। अर्कोतर्फ, यो अक्सर ऊर्ध्वाधर उपकरणको रूपमा प्रयोग गरिएको छैन, जसको अर्थ छ कि अधिकांश काम गर्ने शोर नगरी छ। सामान्य बिजुली मोडेलहरू, निस्सन्देह, बिजुली जडान चाहिन्छ र विस्तार विस्तार केबल कार्य सतहमा अनुकूलित हुन्छ। त्यहाँ, उदाहरणका लागि, हरेक किसिमका बागवानीको लागि शक्ति जडान उपलब्ध छैन। केही प्रयोगकर्ताहरू पछि केबल छोडेर बाधा छ, खासगरी जब त्यहाँ बाटोमा धेरै बन्दरहरू र फूलहरू छन्। निरन्तर, यसलाई पुन: डिजाइन गरिएको छ ताकि फ्याँक्नु वा फूलहरू तोड्न नदिनुहोस्। स्किनिफायरको साथ केबल बढाउनु एक अतिरिक्त जोखिम हो जुन केबल क्षतिग्रस्त हुनेछ र प्रतिस्थापित हुन्छ।
रिचार्जयोग्य ब्याट्रीहरूसँग एकाइहरू पावर केबलको हानिकारक बिना। यद्यपि ब्याट्रीहरूसँग मात्र एक सीमित क्षमता छ र त्यसपछि फेरि पावर हुनु पर्छ। यहाँ यो एकै समयमा धेरै ब्याट्रीहरू खरीद गर्न फायदेमंद हुन सक्छ, त्यसैले एक सुचारु परिवर्तन हुन सक्छ। यसरी काम गर्न बाधा छैन। बिजुलीका स्किफायरहरूको तुलनामा अधिकृत स्प्रिफिफायरहरूको लागि वजन उच्च छ किनकी संचयकर्ताको भार बढेको छ। पेट्रोल स्पिनिफायरहरू पावर जडानबाट मुक्त हुन्छन् र रिचार्जयोग्य ब्याट्रीहरूको रिचार्ज टाइभहरू छन्। एक पल्ट पेट्रोल देखि भरी, जो निश्चित रूप देखि काम गर्नु पर्छ, यो इकाई आफ्नो काम हरेक ठाँउ गर्दछ। एक पेट्रोल-संचालित स्केयरफायरको वजन इलेक्ट्रोभेरेरेट भन्दा उच्च छ, जुन मेहनत मिट्टीमा एक गतिविधि हो। तिनीहरू पनि उचाइमा समायोजित गर्न सकिन्छ र सामान्यतया रोलर्सहरू परिवर्तन गर्न सम्भव छ। पहाडमा, चाइल्ड ड्राइभको साथ एउटा मोड वजनको कारण मनपर्छ। शोर स्तर र निकास ग्याँसहरू नकारात्मक असर छन्। तिनीहरू बटनको धक्कामा पनि काम गर्दैनन्, तर केबल स्टार्टरको साथ सुरु गर्नु पर्छ, जसको रूपमा कुनै विद्युत् स्टार्टर स्थापना गरिएको छैन। पेट्रोल इन्जिनहरू पनि अधिक शक्तिशाली छन्, जसले तिनीहरूलाई अझ गाह्रो बनाउँदछ।
स्किमिङको लागि आदर्श मध्य-अप्रिल र मध्य-मई बीचको समय हो। बिल्कुल खाद र घाँटी!
स्वादफायर सामानहरू प्रयोग गर्नुहोस्
यदि स्प्रिफायर नियमित रूपमा प्रयोग गरिन्छ भने त्यहाँ समयको ब्लेडमा पहिरनको चिन्ह हुनेछ। चक्कुहरू डिलर बन्छ र अब काममा प्रदर्शन गर्दैनन्। विशेष गरी जब घाँसको सतहमा धेरै पत्थर र जडहरू हुन्छन्, चाकूहरू वास्तविक कडा परिश्रममा सामना गरिरहेका छन्, जुन निशानहरू बिना छोड्नु हुँदैन। चाकूको आपूर्ति योजना बनाउनुहोस् ताकि तपाईलाई चिन्ता पर्दैन। ब्वाईट चाकू स्पष्ट रूपमा उल्लेखनीय छ। कार्य अब सजिलो छैन, दु: खको परिणाम पनि अब पर्याप्त छैन। यदि तपाईंले स्पेयर ब्लेड किन्नुभयो भने, तपाईंले काम गुमाउन रोक्न आवश्यक छैन। चाँहिहरू बदल्न कठिन छैन।
तपाईंको लान अन्तमा फेरि सजिलै सास फेर्न सक्षम हुनुको लागि, एकमात्र उपायको रूपमा दु: ख पर्याप्त छैन। सबै हरियो बर्बाद हटाउन यो महत्त्वपूर्ण छ। हटाइएको छैन, अक्सीजन र सूर्यको रोशनीलाई लानबाट टाढा राख्नुहोस्! घातक, किनकि अक्सिजन र प्रकाश को कमी मास को सुधार को बढावा दि्छ। यहाँ धेरै उपयोगी छ एक फ्याङ्गस्केक पनि भनिन्छ, जसलाई फ्यानफ्याङस्के भनिन्छ। यदि ग्रीन अपशिष्ट भूमि प्रत्यक्ष रूपमा fangsack मा यदि यो एक ठूलो राहत हो। विशेष गरी ठूला सतहहरूमा माछा रसिलो एक धेरै थोरै गतिविधि हुन्छ। फ्याङ्गस्केक बाट सिधा, कम्पास कम्पासमा वा जैव-टनमा निस्किएको छ। यसले अन्य चीजहरूको लागि धेरै समय बचत गर्छ। स्केकरफायरको लागि नक्कली प्याक चयन गर्नुपर्छ।
यदि एक स्नेहक को घास बैग छैन, घास, मास र अन्य जैविक अवशेषहरु को लन मा रहछन। लानमा सबै कुरा छोड्नुहोस् निश्चय होइन। त्यसकारण, तपाइँलाई महत्त्वपूर्ण कार्य चरणको लागि एक किरण चाहिन्छ। हरियो अपशिष्ट सजिलै संग व्यावहारिक रेकबाट हटाउन सकिन्छ। तथापि, केवल जब लान सतह सानो छ। यदि, अर्कोतर्फ, क्षेत्र ठूलो छ, यो चाँडै एक कठिन बागवानी हुन्छ। जब आप स्प्रिफायरफायर किन्नु, किन्क किनमेल खरीदारीमा प्याक गर्नु पर्छ, त्यसैले तपाई अहिले सुरू गर्न सक्नुहुनेछ। अन्तमा तपाईंले केवल हरियो अपशिष्टलाई निषेधित गर्नुपर्छ।
त्रुटिहरू सजिलैबाट बच्नुहोस्
मूलतः, एक उच्च गुणस्तरको यन्त्रको साथ, सही अनुप्रयोगको साथ, कुनै सकल त्रुटिहरु स्न्याटिफिकेसनको साथ हुन्छ। यद्यपि, त्यहाँ एक वा अर्को स्रोत त्रुटि हो, जुन राम्रो लेन गुणस्तर प्रदान गर्दैन। यद्यपि, तपाईं पूर्ण रूपमा अनुभवहीन हुनुहुन्छ, त्रुटिहरू जोगाउन सुझावहरू मद्दत गर्न। यी महत्त्वपूर्ण छन् किनकि हानिकारक चाँडै तुरुन्त उपचार गर्न सकिँदैन। हाम्रो सुझावहरूको साथ, दु: ख को नकारात्मक असर हुन सक्दैन।
• यदि लान धेरै अधिक छ भने, दुबईको ब्लेडले गहिराइमा गहिरो घुमाउन सक्दैन।
• प्रायः क्षेत्रहरू विकृत हुन्छन् - एक वर्षमा अधिकतम दुई पटक सिफारिस गरिएको छ।
• प्रायः स्किनिफायरलाई एकै ठाउँमा प्रयोग नगर्नुहोस्, किनभने नंगे सतहहरू परिणाम हुनेछ। लनको वृद्धि पनि यसको कारण छ।
• सँधै एक दिशामा मोडिदिनुहोस् ताकि कुनै अवशेष क्षेत्रहरू छैनन्।
• प्रयोग पछि उपकरण सफा गर्नुहोस्।
सही लानको हेरचाह पछि
लानको लागि, दु: खको अर्थ एक ठूलो तनाव हो। यस कारणको लागि, उहाँले विशेष हेरविचारको लागि कल गर्नुहुन्छ। पहिलो नजरमा हरियो क्षेत्र खराब देखिन्छ, तर यो सामान्यतया सामान्य छ। यो तनावपूर्ण उपचार पछि लान्डमा पहिलो भाग हुन सक्दैन। उसलाई आराम समय दिनुहोस्। यस चरणमा नकारात्मक प्रभावहरु शक्तिशाली तापमान र एक मजबूत सौर विकिरण हो। दुवै अवस्थामा, बागान नली अब प्रयोग गरिनु पर्छ। अब नयाँ घाँसको बीउ लागू गर्न आदर्श छ। पछि लन पानी नबिर्सनुहोस्।
हेरविचार र उपकरण सफा गर्नुहोस्
पनि एक हात-व्यवस्थित ठेकेदार काम पछि असामान्य हुँदैन। तिनीहरू आफ्नो उपकरण र उपकरणहरूमा धेरै रमाइलो गर्न चाहन्छन् र सेवा गर्न उनीहरूको इच्छुकतामा भरोसा गर्न सक्छन्। यसैले, माटो र मिडको साथ साथै रूट उपचारहरू ब्लेडबाट पूर्ण रूपमा हटाइनु पर्दछ। यदि मिट्टी पहिले नै सुकेको छ भने यो सफा गर्न उत्तम छ। त्यसपछि त्यो बस एक मोटो रूट ब्रश संग बन्द हुन्छ। कपडाले थप गहिरो कणहरू हटाउँछ। ह्यान्डल वा ह्यान्डल नबिर्सनुहोस्। हात को वेल्डिंग संग संयोजन मा धूल छिट्टै एक गंदा क्रस्ट बनाउन सक्छ। सबै बगैचा उपकरणहरूको भण्डारण स्थान सुक्खा हुनुपर्छ। यो विशेष गरी कुनै पनि प्रकारका बिजुली उपकरणहरूको लागि सही हो।
मोटरसाइकल स्किफायरको अवस्थामा, ब्लेड, वेंटिलेशन स्लट्स र क्याप्चर कन्टेनर सफा वा खाली गर्नु पर्दछ। पेट्रोल इन्जिनलाई थप समयको साथमा मर्मत चाहिन्छ। इन्जिनको क्षतिबाट बच्नको लागि प्रत्येक प्रयोगको लागि तेल स्तरको जाँच गर्नु पर्छ। तापनि तेलको खपत कम छ भने, इन्जिन तेलले इक्सको लीक वा गलत भण्डारणबाट लीक गर्न सक्छ। ईन्धन पाइपहरू र वायु फिल्टर फिल्टर वर्षमा एकपटक जाँच हुनुपर्छ। तिनीहरू आवश्यक हुनु पर्दछ वा प्रतिस्थापन गर्नु पर्छ।
केहि मोडेलहरू स्पार्क प्लगहरू छन्, जुन गहिराइ र पहेंलो गर्न सक्छन्। तिनीहरू सामान्यतया समस्याहरू सुरू गर्दछन्। निकास वा भित्री निकास ग्याँसबाट पेट्रोल निकास, पनि दोषयुक्त स्पार्क प्लग वा खराब समायोजन कार्बोरेटरको कारण हुन सक्छ। आपातकालीन अवस्थामा कृपया सधैं बागवानी कार्यशालालाई सल्लाह दिनुहोस्। पेट्रोल, जो पेट्रोल स्केयरफायरको चित्रित सतहहरूमा पाउँछ, सीधा कपडाबाट टाढा पर्छ। पेट्रोल आक्रमण पेंट गर्छ र जंगली सुरक्षालाई नष्ट गर्दछ। गैसोलिन संचालित यन्त्रहरू सधैं एक लीक-प्रूटरमा भण्डारण हुनुपर्छ। उस्तै लागू हुन्छ, निस्सन्देह, क्यान्सरहरूमा पेट्रोल आपूर्ति। विस्फोट र आगो खतरा पनि हेर्न सकिन्छ। भण्डारणको लागि, यो राम्रो तरिकाले हानिकारक र लकयोग्य कोठाहरू प्रयोग गर्न सिफारिस गरिन्छ।
इलेक्ट्रिक बगैचा उपकरण, यदि तिनीहरूसँग पानीको सुरक्षा छैन भने मात्र सुक्खा मौसममा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
भाडा वा खरिद गर्ने?
एक स्किफाफायर किन्न वा भाडाको सम्भावना छ। यदि यो शायद एक-पटक प्रयोग हो भने, किराए को बारे मा सोच्न सकिन्छ। यदि तपाईंलाई बागवानी उपकरण धेरै पटक चाहिन्छ भने, यो निश्चित रूपमा खरीदको लायक छ। हामी तपाईंलाई अझ सजिलै निर्णय गर्न मद्दत गर्नेछौं।
यदि स्प्रिफायरलाई एक वर्षमा धेरै पटक चाहिन्छ भने, खरिद निश्चित रूपमा सही निर्णय हुनेछ। सिद्धान्तमा, क्षेत्रको आकारमा मेशिनले निर्णयमा भूमिका खेल्छ। विशेष गरी ठूलो क्षेत्रहरूको लागि खरीद सिफारिस गरिएको छ। सँधै मौसम मौसम चाहिएको छैन। सुन्दर दिन सार्न सक्षम हुन को लागी उधारो भएको उपकरणको लागी कुरा होइन। प्रायजसो यी सबै मिसिनहरू पहिले नै भाडामा लिएका छन्, जुन पक्कै पनि कष्टप्रद छ। यो धेरै सजिलो छ भने गेराजमा आफ्नै स्क्यानरफायर यसको उपयोगको लागि पर्खिरहेको छ। तपाईंको आफ्नै यन्त्रले तपाईंलाई निश्चित रूपमा अधिक स्वतन्त्र बनाउँछ।
तपाईं रिटेलरहरूमा खुदरा वा अनलाइनमा आफ्नो आफ्नै उपकरण किन्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी इन्टरनेटमा धेरै राम्रो प्रस्तावहरू फेला पार्न सकिन्छ। यहाँ एक धेरै ठूलो चयन हो, प्रत्येक मोडेलको बारेमा पनि महत्त्वपूर्ण जानकारी। तुलना गर्नुहोस्! अन्य खरिदहरूको समीक्षा निर्णय सजिलो बनाउँछ। इन्टरनेटमा खरीद गर्दा, तपाईं समय, यात्रा खर्च र पैसा बचत गर्न सक्नुहुनेछ। विशेषज्ञ रिटेलरहरूको विपरीत, तपाइँ सधैँ इन्टरनेटमा नवीनतम मोडेलहरू फेला पार्नुहुनेछ। त्यसोभए तपाईं एक पसलमा पर्नुहुन्न, जसलाई बिक्रेताले मानिसलाई ल्याउन सक्छ।
तपाईंको आफ्नै दु: खको साथ यो प्रायः नवीनतम मोडेलहरू खरीद गर्न सक्षम हुन असंभव छ। जसले जोसुकै पुरानो समयको लागि महत्त्वपूर्ण कुरालाई जोड दिन्छ, खरिद शायद थोडा लामो छ। कष्टप्रद हुन्छ जब नयाँ मोडेलहरूले आफ्नै मोडेललाई लम्बाई गर्न जान्दछन्। खरिद गरिएको उपकरणलाई स्व-सरकारमा सेवा दिइन्छ र सुधारिएको छ, जुन निश्चित रूपमा लागतसँग सम्बन्धित छ।
शुल्कहरू सामान्यतया कम छन्, जसले आफ्नै वालेटलाई खारेज गर्दछ। यो प्राय: हार्डवेयर पसलहरूमा भाडामा लिइएको छ। निर्माताहरु को लागि एक आदर्श तरीका विज्ञापन गर्न को लागि। त्यसकारण, नवीनतम यन्त्रहरू प्राय: उपलब्ध छन्। तैपनि मर्मत र मरम्मतको लागी पनि खर्च गर्न सकिँदैन, जुन साँच्चै व्यावहारिक छ। स्किनिफायरका लागि स्टोरेज स्पेस पनि वितरण गर्न सकिन्छ।
नुकसानले फाइदा स्पष्ट पार्छ। बुकिङ गरेर मात्र प्रयास, उठाउँदै र फर्काउन कष्टप्रद छ। तपाईले सधै एक उपकरण प्राप्त गर्नुहुने चाँडै अरू भाडामा लाग्ने भीड ठूलो छ। शरद ऋतु र वसन्त, हरेक बागवानी स्केयरफायर प्रयोग गर्न चाहन्छ। लामो प्रतीक्षा समयको साथ छिटो प्रतीक्षा समयको आशा गरिन्छ, जुन आंशिक रूपमा धेरै कष्टप्रद हुन सक्छ। यदि उपकरण धेरै वर्षको लागि धेरै वर्ष उधारिएको छ भने, मूल्य अक्सर खरिद विरुद्ध भाडा को औचित्य प्रदान गर्न सक्दैन। त्यस मौसममा थप्नुहोस्! भारी वर्षाले चाँडै बिल मार्फत ड्यास बनाउँछ, जसले भाडाको म्याद पूर्ण रूपमा अनुपयुक्त बनाउँछ।
बागवानी उपकरणहरूको निर्माताहरूले ग्राहकहरूको बढ्दो मागहरू पूरा गर्न खोज्छन्। यसरी, अवस्थित गुणहरू सुधार गर्न सकिन्छ। पूरै नयाँ विचारहरू बजारलाई बलियो बनाउँछ।
उदाहरणका लागि, मफलर हल्ला प्रदूषण कम गर्न पेट्रोल फावडा थप परिष्कृत हुन्छन्। यो केवल प्रयोगकर्ताको लागि थप सुविधाजनक छ, तर पनि छिमेकी वा वातावरण अब परेशान महसुस हुँदा सम्भव आवेदन र सञ्चालन पटक विस्तार। विशेष शान्त उपकरणहरू मा एक हल्ला को उन्मूलन यो सबै समयमा, सिद्धान्त मा काम गर्न सक्छन्।
प्रगति को लागि अर्को समस्या ब्याट्री-संचालित उपकरणहरू को ब्याट्री हो। कम समय बागवानी मार्फत हराएको छ भनेर नयाँ प्रविधीहरु चार्ज समय एकदम छोटो। जसद्वारा उपकरणहरू लाइटर छन् र अब सञ्चालन रहन सक्छ नै वजन र क्षमता मा, सुधार गर्दै हुनुहुन्छ। सेवा जीवन र शुल्क चक्र संख्या एकदम वृद्धि भएको थियो। शान्त बिजुली उपकरण अक्सर प्रारम्भिक वा लेट घण्टा मा प्रयोग गर्न बाँकी छ। तर, यो पनि त उज्ज्वल सामान्यतया छैन। यो समस्या ब्लेड को काम क्षेत्र रोशन द्वारा केही निर्माता खाता सहन। ऊर्जा आर्थिक र उज्ज्वल एल ई डी यो सम्भव बनाउन। त्यसैले पनि गरिब प्रकाश अवस्थामा ठीक देखेको छ, यन्त्र संग ड्राइभिङ कहाँ छ। फूल कृतज्ञ बेड। Matted स्थानहरू अब उप्रान्त पुन सम्पादन लन बचत, अनदेखी गर्न सकिन्छ।
आधुनिक स्किफायरहरूको अनुप्रयोगहरूको दायरा विस्तार गरिएको छ। त्यसैले त्यहाँ लामखुट्टेहरू छन्, जुन पनि ऊर्ध्वाधरको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसकारण, केवल उपकरणको खरीद घटाउँछ, जुन भण्डारण समयमा स्पेस बचत गर्दछ। यी कोर्जी यन्त्रहरू विभिन्न आकारहरूमा उपलब्ध छन् - विद्युतीय र इलेक्ट्रोनिक पेट्रोल इन्जिन.
Einhell इलेक्ट्रिक Scarifier फ्यान RG-SA 1433 (1400 W, 33 सेमी कार्य चौड़ाई,3गुना ऊंचाई समायोज्य, 28 L, 400 m² सम्म क्षेत्र को लागी सिफारिश गरीयो)
2 in1 कम्बी इकाई 1.400 वाटको साथ शक्तिशाली श्रृंखला मोटर र पेशेवर लॉन केयरको लागि 3- समायोज्य कार्य गहराईको साथ
20 स्टेनलेस स्टील चाकूका साथ बल-असर चाकू रोलरको माध्यमले जोस सहित मास र सामाजस्ता निकासी हटाउन सकिन्छ।
48 पंजाहरूको साथ बल-फ्यान रोलर द्वारा ल्यानको छिटो र गहन भेन्टिलेसन
Ergonomically आकारको गाइड गाइडको साथ ऊँचाई-समायोज्य र स्पेस-बचत फोल्डर गाइड पट्टी
पार्किंग मैत्री पार्किंग स्थिति र सफा स्टोभेजको लागि व्यावहारिक भित्ता कोष्ठक
एक इकाईमा वायुङ र स्किटिङ गर्दै
800 वर्गमीटर सम्म मध्यम आकार लनहरूको लागि उपयुक्त 38 सेन्टिमिटरको चौडा चौडाई चौडाईको लागि धन्यवाद
समात्ने टोकरी समेत
काम गर्ने गहिराईको द्रुत परिवर्तनको लागि केन्द्रीय 5-गुना गहिराइ समायोजन
ऊर्ध्वाधर देखि हावाबाट परिवर्तन गर्न सजिलो उपकरण-मुक्त रोल
गार्डेना ०03395 20 -२० एसकारिफिडोर, मानक प्रदर्शन
प्रभावकारी लॉन हेरविचार: दुबईमा मिलिमिटर गहिराइमा गहिरो प्रवेश गर्दछ र कुशलतापूर्वक मास र टर्फ महसुस हुन्छ।
प्रयास गर्ने कार्य: स्किटिङ स्कूटरले विशेष प्रोफाईल र सजिलो कामको लागि लिफ्ट अक्षको साथ बलियो पाङ्ग्राहरू छन्।
जिग-फ्रि प्लग-इन प्रणाली: बगैचाको उपकरणले सबै गार्डेन संयोजन प्रणाली ह्यान्डलमा फिट बनाउँछ र सजिलै संग स्लट गर्न सकिन्छ र खराब छ, साबित प्रविधि विश्वसनीय विश्वसनीय काम गर्दछ।
अनुकूलतम संक्रामन संरक्षण: गार्डेन संयोजन प्रणाली स्किटिङ केटा उच्च गुणवत्ता वाला स्टील बाट बनेको छ जसले एक डिपोप्लास्टिक कोटिंग र स्प्रिंग स्टील ट्याक्स
डिलिवरीको दायरा समावेश छ: 1x गार्डेन संयोजन प्रणाली स्केटिङ केटा (समावेश नगर्ने, अलग बिक्रि)
WOLF-Garten - इलेक्ट्रिक स्कार्फफायर एसवी 302 ई; 16AFDEKA650Anzeige
कार्य चौडाई: 30 सेमी
इन्जिन: 1.200 डब्लु इन्जिन
कार्य गहिराई समायोजन: केन्द्रीय 5-fold
2 मा 1: स्केकरफायर र फ्यागस्केक
फान्ग्सकैक: 35 एल
Brast विद्युत Scarifier फावडा 1600 वाट 38cm काम चौडाई 48L क्याचरले 2in1 COMBI बयलर प्रशंसक MoosentfernerAnzeige
जर्मन परीक्षण संस्थान द्वारा सुरक्षाको लागि परीक्षण गरिएको ब्रास्ट इलेक्ट्रिक स्कारिफायर BRE-RV-3800, सबै भन्दा राम्रो उपकरण छ र तपाईंको लनको राम्रो हेरचाह र हेरचाहको लागि धेरै विशेष सुविधाहरू छन्: हाम्रो पावर प्याकेजमा यस मूल्य दायरामा एक विशेष शक्तिशाली १1600०० वाट मोटर छ र विशेष गरी ठूलो cm 38 सेमी काम चौडाइ
विशेष 2in1 समारोह: 1 1 Dethatcher र प्रशंसक-रोलर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ scarifying र airing दुवै, को सम्बन्धित रोलर परिवर्तन गर्न सजिलो छ
48 लिटर एक विशेष ठूलो हटाउन सकिने संग्रह झोला, एक केन्द्रीय 5-स्तर काम गहिराई समायोजन, उपकरणमा एक पूरा ह्यान्डल साथै एक Ergonomic, उचाइ-समायोज्य स्टीयरिंग rubberized नरम पकड संग ह्यान्डल, जो यस प्रकार यो brast पेशेवर उपकरण प्रोफाइल राउन्ड जोडेको र छ गर्न सकिन्छ हाम्रो brast lawnmowers गर्न आदर्श पूरक
किन सिकाउने? अघिल्लो स्कोरमा, पुरानो पर्खाल, मास र सामालाई हटाईयो। पानी र पोषक राम्रो घाँस पातहरू बलियो गरिन्छ, घाँस जरा फर्कन र छिटो बढ्न सक्छ। किन हावा लान्डको बीचमा कम्पोक्टेड माटो वेंटिलेशन छेदको माध्यमबाट पराजित हुन्छ। अधिक ओक्सीजन जडहरूमा फर्किन्छ - लान स्वस्थ बढ्न सक्छ!
प्राविधिक डाटा: भोल्टेज 230V / 50Hz, मोटर अन्तर्गत नेटवर्क सञ्चालन: 1600 वाट, संग्रह झोला मात्रा 48 लीटर काटन चौडाई 38cm, संग 16 diameters scarifying, 24 संग प्रशंसक रोलर Vertikutierstufen 5stufig केन्द्र देखि -12mm / -9mm / -6mm / -3mm + 6mm गर्न सुई , अगाडि पाङ्ग्रा 200mm, पछिल्लो पाङ्ग्रा 150mm, वजन: 11,5kg
बॉश स्कारिफायर AVR 1100, घाँस पक्राउ गर्ने, दफ़्ती (1100 W, 32 सेमी कार्य चौड़ाई, 50 l क्याचर भोल्युम) प्रदर्शन
AVR 1100 स्प्रिफायर - तपाईंको लानको लागि गहन हेरविचार
लन, मास र सामालाई हटाउँछ; अभिनव रोलर, बलियो स्प्रिंग स्टील ब्लेड र एयर इनलेट उद्घाटनको लागि राम्ररी र छिटो धन्यवाद
उत्कृष्ट कार्य परिणाम भारी मात्रा मा infestation संग र लॉन उपेक्षित शक्ति शक्तिशाली र शक्तिशाली को लागि धन्यवाद 1100 वाट पावरडाइभ ​​इन्जिन
50-liter catchbox को लागी लामो काम गर्ने अन्तराल र कम समयको लागि आवश्यक समय; कम्पैक्ट र सजिलो भण्डारणको लागि डबल तहयोग्य स्पायर र समाप्ति समापन बक्स
वितरणको दायरा: AVR 1100, फान्गोरबोब
Makita UV3600 बिजुली स्किफायर, एक्सएनएमएक्स वाट सूचक
मूल मकिता गुणवत्ता, टिकाऊ र कडा
Scheppach बिजुली scarifier SC36 (1500 वाट, काम चौडाई: 36 सेमी पट: 45 एल, क्षेत्रमा अप 800m²,5उचाइ स्थितिहरू, उचाइ अप मिमी5लागि सिफारिस गरिएको) - Incl Scarifying र फावडा रोलर प्रदर्शन।
भिन्न: स्प्रिेयरफायर एक छोटो समयमा फ्यान रोलरसँग लैजान सकिन्छ। यसले मस, मृत घास, पात र अन्य मलबे हटाउनेछ।
विशेषताहरू: स्केयरफायरमा 3in1 प्रकार्य छ, जुन यसले सम्भावित, ह्याण्डल वा यो यन्त्रसँग समात्न सक्छ। यसबाहेक,5स्तर-15 बाट केन्द्रीय कार्यवाही उचाइ समायोजन सेट गर्न सम्भव छ सम्भव छ।
स्थानान्तरण: उपकरणमा स्थापित हुने होल्ड ह्यान्डल, स्पेस-बचत भण्डारण र सजिलो यातायातलाई अनुमति दिन्छ।
मोटर: स्किफाफायरमा विद्युत् मोटरको लागि धन्यवाद, सजिलो सुरुवात सम्भव छ, र यो इञ्जिन पनि धेरै कम रखरखाव हो।
प्रसव: 1, Scheppach विद्युत Scarifier x 1 सहित x scarifying र फावडा सिलेंडर वजन:। किलोग्राम 13,5
1200 वाट मोटरको साथ ग्रिजली इलेक्ट्रिक Scarifier, 31 सेमी काम चौड़ाई, सुरक्षा स्विच, स्कारिफिंग रोलर सूचक सहित
शक्तिशाली 1200 वाट इन्जिन उच्च खींचने शक्ति संग
कार्य चौडाइ: 31 सेमी, काम गर्ने गहिराई: 10 मिमी र 19 समय सम्म गहिराइ समायोजन सम्म
उच्च सुरक्षाको लागि सुरक्षा स्विच र अधिभार लोड
स्पेस-बचत स्टोरेजका लागि फिर्ता योग्य ह्यान्डल
स्किमिङ रोलर सहित। मिल्दो फिशिंग बैग र एक अतिरिक्त प्रशंसक रोलर सामानको रूपमा उपलब्ध छन्।
IKRA इलेक्ट्रिक स्कार्फफायर लॉन एयरिएटर IEVL 1840 ट्रे 55L कार्य चौडाई 40 सेमी कार्य गहिराई समायोज्य 1.800W एन्जिन
2IN1 युक्तिहरु स्केलिङ र लिपि को लागि उपकरण
Incl। 20 इस्पात ब्लेड र प्रशंसक रोलरको साथ 24 इस्पात वसन्त तालिका / उपकरण मुक्त रोलर परिवर्तन संग स्कार्फियरफायर रोलर
पावर १,1.800०० वाट / वर्किंग चौडाई cm० सेमी / कार्य गहिराइ केन्द्रिय रूपमा समायोज्य +१२ देखि –१२ मिमी
समय बचत: समावेश गर्नुहोस् ग्रस थैली क्षमता 55 लिटर / लान-अनुकूल, ठूलो पाङ्ग्रा / आरामदायक पनीर
एकीकृत लेड ह्यान्ड / तह गाइड रेल / स्पेस-बचत भण्डारण / ठिक आवास / केबल तनाव राहत